शेयर बजारमा एतिहासिक कीर्तिमान, आजै ९ अर्ब २२ करोड बढीको कारोबार « Lokpath
२०७७, १४ मङ्सिर आईतवार १६:२९
शेयर बजारमा एतिहासिक कीर्तिमान, आजै ९ अर्ब २२ करोड बढीको कारोबार
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ मङ्सिर आईतवार १६:२९
काठमाडौं । शेयर बजारले फेरीपनि एतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक र खरिदविक्री रकम दुवैमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । गत विहीबार १ हजार ८ सय ९३ दशमलव २४ अंकमा पुगेर बन्द भएको बजार आज (आइतबार) ७५ दशमलव ०२ अंकले बढेर १ हजार ९ सय ६८ दशमलव २७ अंकमा बन्द भएको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटीभ परिसूचक पनि १८ दशमलव ७६ अंकले बढेर ३ सय ८३ दशमलव ९३ अंकमा बन्द भएको छ । कारोबार रकमले पनि अहिले सम्मकै नयाँ किर्तिमान कायम गरेको छ । दिनभर २ सय कम्पनीको ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ४८ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँको २ करोड ५९ लाख ४५ हजार ३ सय ८० कित्ता शेयर खरिद विक्री भएको छ ।
पछिल्लो समय शेयर बजारमा लगानीका लागि उपयुक्त माहोल बनेपछि लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदै गएका छन् । त्यसैले बजारमा शेयरको माग बढेको छ भने परिसूचक र कारोबार रकमले नयाँ उचाई चुम्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घट्नु, कम्पनीहरुको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण राम्रो निस्कनु र कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बढ्नुले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको देखिन्छ ।
त्यसैले पनि बजारमा परिसूचकहरुले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै जाने विश्वास गरिएको छ ।
कारोबारमा आएका समूह मध्ये व्यापार, होटल, निर्जीवन बीमा र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह भने घटेका छन् । त्यस बाहेकका सबै समूह बढेका छन् । आइतबार लगानीकर्ताहरु बैंकिङ समूहमा सबैभन्दा धेरै आकर्षित भएका छन् । बैंकहरुको शेयरमा खरीदचाप बढ्दा २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांश बैंकको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
विकास बैंकहरुको शेयरमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढी देखिएको छ । आइतवार सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूह ८ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछि बैंकिङ समूह ७ दशमलव ८१ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै जीवन बीमा समूह २ दशमलव २४ प्रतिशतले बढेको छ । जलविद्युत समूह १ दशमलव ८ प्रतिशत, वित्त समूह १ दशमलव ३७ प्रतिशत, लघुवित्त समूह शुन्य दशमलव ९७ प्रतिशत, म्यूचअल फण्ड समूह शुन्य दशमलव ४१ प्रतिशत र अन्य समूह शुन्य दशमलव ०२ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै सबैभन्दा धेरै शेयर कारोबार हुनेमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेको छ । यो कम्पनीको मात्रै ५१ करोड ७९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बढीको शेयर खरिदविक्री भएको छ । यस्तै कुमारी बैंकको शेयर कारोबार पनि ४० करोड ८० लाख ६२ हजार रुपैयाँ बढीको भएको छ । आइतबार कुमारी बैंकको १४ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन भएकाले पनि लगानीकर्ताले शेयरको माग बढाएको देखिन्छ । ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर कारोबार हुने कम्पनीहरुमा नबिल बैंक, प्रभु बैंक र नेपाल बैंक रहेका छन् ।
कारोबार बन्द हुँदा सम्म ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका शेयरधनीले १० प्रतिशतले कमाएका छन् । यस बाहेक १८ वटा कम्पनीहरुको शेयर मूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ ।
नेप्से परिसूचकमा उच्च वृद्धि भएपनि ५० वटा कम्पनीका शेयरधनीले गुमाएका छन् । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा बिशालबजार कम्पनीका शेयरधनी रहेका छन् । जसको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ ।
डा. केसी भन्छन्- ‘मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउने सिफारिस कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन’
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता एवम् वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस